म डा. उपेन्द्र महतोको स्कुलिङबाट आएको व्यक्ति हुँ, अहिलेसम्म पराजित भएको छैन् : डा. केसी (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
म डा. उपेन्द्र महतोको स्कुलिङबाट आएको व्यक्ति हुँ, अहिलेसम्म पराजित भएको छैन् : डा. केसी (भिडिओसहित)
काठमाडौं, २० असोज । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आगामी अक्टोबर २० मा हुने महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेद्धवारी घोषणा गरेका डा. बद्री केसीले आफू पार्टीको उम्मेद्धवार नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘मेरो पार्टी भनेको गैरआवासीय नेपाली संघ हो । ऋषिजी, हरेक व्यक्तिको केही न केही राजनीतिक आस्था हुन्छ । म मा पनि कुनै राजनीतिक आस्था होला । तर, गैरआवासी नेपाली संघमा म विगत १९ वर्षदेखि छु । र, मेरो १९ वर्षको कार्यकालमा संघमा बस्दाखेरि मैले कुनै पनि चुनावमा न राजनीतिक पार्टीको टिकट लिएर आएको छु, न म चाहीँ संघमा कार्यरत हुँदाखेरि राजनीतिक पार्टीको एजेण्डा नै अघि ल्याएको छु । मेरो एजेण्डा भनेको तममा ७० लाख नेपालीहरुको एजेण्डा हो ।’
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले गैरआवासी नेपाली संघको चुनावमा पार्टीको कुनै भूमिका नहुने जिकिर गरे । उनले आफू पार्टीको उम्मेद्धवार नै नभएको जिकिर गरे । उनले एनआरएनएलाई राजनीतिक पार्टीको अखडा बनाउने प्रयत्न भएको सुनाए । तर, भईनसकेको उनको दाबी छ ।
उनले आफूले अहिलेसम्म संघमा भएको कुनैपनि निर्वाचनमा पराजित नभएको जिकिर गरे । उनले आफू संघका संस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने, डा. जुगल भुर्तेल, भीम उदासको स्कुलिङबाट आएको सुनाए । उनले भने,‘उहाँहरु चार जना फरक फरक पार्टीको राजनीतिक धारणाको व्यक्ति हो ।’